Haaduu Lamaan Wal Muraa Jennan Inni Qara Qabu Hin Dhisaa Jedhe – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHaaduu Lamaan Wal Muraa Jennan Inni Qara Qabu Hin Dhisaa Jedhe
Damee Boruu: Waxabajjii 17/2020
Haaduu lamaa kan wal gita qara qabu wal riga malee wal hin muru. Warri aadaa, dudhaa fi eenyummaa walii gadi fageesse wal beeku salphaatti wal hin dhagu yookan wal hin gowwomsu. Bareechee dammaqee, qophaa’ee wal eeggata. Warri wal beeku dura dabarsee namni tokko yaroo dubbii fidee dhufu, eessaa dhufe? Eenyu erge? ergaa maalii fidee dhufee jedhee wal qorata. Kanaafu kan isa baasuu dura darbanii beeku.
Jecha kana mee duraa afaan isaaniin jechuun yaala. Sana boodas afaan keenyatti hiikuun yaala. Afaan Amhaaraan ” Sewwuun Maamen Qabroo New”jedhu. Jechuun kun hiikaan isaa “namni kan amanamuu erga owwaalamee booda”, kan jedhu dha. Kun falaasumaa ilaalcha ittiin guddatan tahuu isaa ti. Manguddummaan Amhaaraa si awwaaluuf malee si amanee, si wajjin nagaa buusee si wajjin jiraachuuf akka hin taane kan mirkaneessu dha. Jaalatanii utuu hin taane dhiibbaa aadaa fi haalli isaan keessatti guddatan hojii isaanii kanaaf isaan qopheessa. Aadaa isaanii kana shaakaluu fi ittiin jiraachuuf dirqamu.
Gaafa injifatamuu isaanii argan masqalaa fi qeesota isaanii guranii gara diina isaanii manguddaaf imala deemu. Waan danda’an hundaa maqaa biyya jaalachuu, Waaqaa fi lafaan kakatanii diina isaanii gowwomsuu fi daguu barbaadu. Manguddoon 52 qeesotaa fi sheekota dabalatee har’a ganama Maqalee kan seenan akeekni isaanii karaa danda’ameen TPLF gufachiisu dha. Mee ilaalaa yaroo darbe Prof. Izqeel Gabisaa fi Obbo Baqalaa Garbaa Universitii Maqaleen afeeramanii Maqalee deemnaan bandaadha jedhaman. Yoo Maqalee deemuun baandaa nama godha tahe, har’a bandaa afurtamii sadiitu Maqalee gale. Partiin Bilxiginnaa kun namoota sammuu hir’uu warra waan wal mormu haasa’u hojjetu walitti funaanee biyyaa diigaa jiru namaaf hin galu.
Galma manguddummaa kun maal tahee jechuu dhiifnee Haaduun Lamaan Wal Hin Muru jennee bira darbuu wayya. Warri Habashaa lachuu aadaa fi qor-qalbii walii bareechanii beeku. Maal barbaacha akka wal guranii deemaa jiran dura dabarsanii beeku. Kanfuu erga owwalamanii booda amanamuuf warra qophaa’e miti. Haaduun inni qara qabu muruu hin dhiisu yoo tahe eenyu akka qara qabu oollee bullee ilaalla.
Dhugaa dubbachuuf tahe manguddoon warri amantiis yoo jaalala biyyaa fi uummataa kan qabaatan tahe guyyaa guyyaan kan dhumaa jiru uummata Oromoo akka tahe isaan miti biyyi lafaa iyyuu ni arga. Yaroo adda addatti Mootummaan nagaa eegsisuu qaba jedhanii akka Uummata Oromoo caalaa fixu dhiibbaa irratti gochaa jiru. Uummatni Oromoo yaroo mana wajjin gubatu, yaroo qabeenyi isaa manca’u, yaroo ijoolleen Oromoo ajjafamfee waraabesi nyaatu argu. Yaroo dubartiin ulfaa, haatii daa’ima afurii, haadaa fi abbaan dargagoo lolaaf manaa bahee ijoollee keessan fidaa jedhamanii ajjeefan achi galagalanii gama ilaalu. Hammeenyi kun hunduu fuynaan isaanii jalatti tahaa jira. Maaliif Mootummaa kana itti bahanii harka kee uummata kana irraa kaasi hin jenne? Waan isaan fedhan waan hojjechaa jiruuf itti tolee dowwachaa jiru.
Mootummaa bira dhaquu miti nu bira manguddummaa kan dhufan yoo humna Oromoo injifachuu dadhaban qofa. Gaafa humni WBO itti jabaatu qeesotaa fi sheekota kanatu masqala guurratee WBO bira deema. Yoo barbaadan immoo waan itti uummata keenya haddochan turan taabota isaanii fudhatanii dhaqu. Yoon waa’ee taabota isaanii dhugaa dubadhee namoota amantii dhugaa hordofan dalansiisu taha jedhee waanan yaadahuuf hin kaasu. Yoo ulfina isaa eegauu barbadan taabotichi bakkuma jiru taa’uu qaba.
Uummatni Oromoo aadaa, dudhaa fi eenyummaan isaa warra Habashaa irraa adda. Uummatni Oromoo dhugaa dubbata. Daandii duggaan nama wajjin jiraata. Namatti maluu fi dubbaan nama owwaluuf boola qotuu hin beeknu.Habashoonni deddeebisanii rakkina aadaan keenya qabu kanatti dhima bahaanii yaroo dheeraaf nu gowwomsuu fi nu daga’uu kaayyoo godhatanii jiru. Kan Habashaayoo dhiifne Diqaalonni Habashaa iyyuu ija keenya duratti maqaa Abootii Gadaa fi Haadha Siiqqeen humna WBO isaan amanee harka laatee daaraa godhanii jiru.
Fakkeenya dagamuu fi Gowwomuu keenya keessa Seenaa Abishee Garbaa kaniin dhage yoon kaase ni gaha. Qadiidaa Wandabee Cooman gama jira. Yaroo humni Amhaaraa as cee’u Abisheetti dhaamata. Abisheen deemee luulesse biyyaa basa. Dhuma irrati Qadiidaa qabatanii kaaba calaqisu itti uwisanii dunkana lama Kokor irra dhaabanii took keessa bahee tokko seena. Kokor lafa Coomaan qixxee lamaan jiru kan karaa tokko duwwaa itti seenani. Yaa Abishee kootuu “ hofcii soogda daaku argata, kabaa warqi ufattaa, biyya kee irratti immoo Mootii taata” jedhee Mootii Taklehaayimaanoti wilii siif galeera jedhan. Nagaa buusuuf akka Qadiidaa gara dunkaa ol seenii jedhan gaafatan. Abisheen garaa hire. Lakki sitti haa hafuu jedhanii loltonni isaa didan. “Horro Guddina Koo Jibitanii’’ jedhee didee dunkana seene. Akkuma seeneen nagaareta tuumuu eegalan. Itti qopaanii waan turanii bakka dhokkatee jiruu waraani Mootii T.H. yaroo duraaf qawween waraana Abishee dabsatee Oromiyaa keessa diriiruu itti fufe.
Waa’e Abishee kan odeeffamu keessaa “Maa gaabiin booda hin taahiin” jedhee quba isaa ishee moggee nyaatee fixe jedhama. Haati manaa Mootii T.H. “Mee Abishee kana naa fidaa goota akka isaa dhaluun barbaada” jette jedhan. Abishee agartee “Yaa Abishee Garbaa kan goodummaa kee kan gommuma kee” jette jadhan. Gowwumni keenya madalli hin qabu. Kan biraa miti namni OPDO itti aangoo kennee bilisoomeera jedhaa? Utuu qara taane dhummaatii saba Ormoo har’ataanee keessumsiisuu qabnu. Yaroo WBOn warra kanatti harka laatee dhumuu Waaqayyoo na hin agrsiisin. Hooggantoonni WBO haxxummaa Habashaa waan bareechanii hubataniif qamaaxura isaanii keessatti ni koofu hin yaadahu. Uummatni Oromoo waan qabu maraan WBO yoo tumse rooroon uummata keenya ni gabaabata. Guyyaa bilisummaas ni dhiyaata!